Ụbọchị: 14 November 2019
Guzobe ulo oru Adapazarı; nile di iche iche nke Electric Railway Series na Urban Okporo ígwè na Turkey enweghị technology na-eme ka mmepụta nke elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè elu na-agba ụgbọ okporo ígwè tent na-azụ na Transport Vehicles [More ...]
N’oge izizi n’obodo anyị n’ọrụ ụgbọ okporo ígwè, n’etiti usoro ihe omume TUBITAK 1007, iji mee ka usoro ịbanye n’obodo bie nke mba ọzọ; Ntinye aka nke ụgbọ elu nke National (UDSP) na TCDD, TÜBİTAK BİLGEM na İTÜ [More ...]
Industrylọ ọrụ lọjistik ahụ nwere njiri digitalization. Ọtụtụ mmalite, bụ ndị hụrụ mkpa ahụ, banyere mpaghara ma buru ọrụ akwụkwọ ntuziaka na akwụkwọ na dijitalụ. Mmalite na-enye ọrụ nke enyebeghị ọkwọ ụgbọ njem, yana dijitalụ [More ...]
4.International Travelexpo Njem Nleta na njem njem dị na Ankara; CD TCDD tinyere aka na Transportgbọ njem njem njem ngosi njem ziri ezi nke 4 na Travelexpo International Tourism na Njegharị nke ATO Congresium na 14 afọ a [More ...]
Newzọ Busgbọala New abụọ si ESHOT; ESHOT General Directorate nyere ndị ọrụ ụgbọ oloko ọhụrụ abụọ na Izmir. A zara oku ụmụ akwụkwọ IZTECH na Izmir Nzuko. Okporo ụzọ njem na [More ...]
1. Congress Congress na ihe ngosi nka bidoro na Ankara; N'okpuru nkwado nke ndị Ministry of Transportation na Infrastructure, General Directorate of Highways (KGM) na Turkey Cement Manufacturers Association (TCMA) na European Concrete Pavement Association (EUPAVE) usoro [More ...]
Bungalow Construction amalitela na Çambaşı Doğa Facilities; Ndị agha nke 2 puku Çambaşı Plateau Winter Sports na Ski Center dị na plateau, Ordu Mayor Dr .. Ntuziaka Mehmet Hilmi Guler [More ...]
Nwere xnumx'üncü nke Erzurum na Turkey Transportation; Obodo Erzurum nke obodo na-akụkwa ọrụ dị egwu na ọrụ ụgbọ njem. Turkey ekenịmde gafee "Ha Metropolitan Transportation Performance" were atọ na Municipality nke nnyocha. Nweta site na nkasi obi [More ...]
967 487 puku ndị mmadụ na Las Vegas na a bi na nke njem site emecha 96 percent akakabarede ọnụego ya dị ka n'oge na-adịghị dị ka o kwere ekwe akakabarede nke Mugla na Turkey Metropolitan Municipality na Special Public Transportation (Otte) otú anya [More ...]
E debere ya ebe a na-echekwa ihe na - emechi n'okporo ụzọ dị na Salim Dervişoğlu Street; Mpaghara Kocaeli, obodo a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dịka promenade, ogige na ogige, yana akụrụngwa akụrụngwa obodo chọrọ etiti obodo. [More ...]
Silzọ Iron silk ga-agafere Iran; Railgbọ okporo ígwè Iran na-etinye aka na Nrụ Ọrụ Otu Ọgbọ China. Mgbe ọ na-agwa National Channel okwu, Onye Minista ofgbọ njem njem ụgbọ ala na Urbanism Muhammad Islami, Otu Ọgbọ Otu ụzọ [More ...]
Channel a kpagide na Istanbul; Edebe bọtịnụ ahụ na arụmọrụ nke Channel Istanbul, nke a ga-ahụ na usoro nnweta na-ebugharị, nke na-efu ijeri 75. Usoro nke Kanal Istanbul na-agbasa ngwa ngwa. Ikike ma tinye ya na Ministrị gburugburu ebe obibi na obodo mepere emepe [More ...]
Onye isi obodo İzmir bụ Tunç Soyer kwupụtara na enyefela atụmatụ Çiğli Tram maka nnabata. Ntughari na Izmir Karşıyaka Enwere mgbakwunye ọzọ na trams. Na İzmir, ọmụmụ banyere mgbatị nke ụgbọ okporo ígwè gaa Çiğli [More ...]